Umthandazo wokusikelela indlu Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ikhaya yindawo apho abantu babuya emva kweeyure zomsebenzi okanye usuku oluqhelekileyo ukuze bahlaziye kwakhona, ukubaleka kwinkqubo yesiqhelo, apha ungafunda Umthandazo wokusikelela indlu kwaye uthando noxolo kulawule kuyo.
1 Umthandazo omnandi wokusikelela indlu
2 Ukubaluleka koMthandazo wokusikelela indlu
Umthandazo omnandi wokusikelela indlu
Zininzi imithandazo yokusikelela indlu, kuba zininzi izizathu zokufuna ukuyenza. Ukholo kunye nokukholelwa umthandazo ngamnye othethiweyo, igama ngalinye elithethiweyo libalulekile ekwenzeni loo minqweno ifunekayo kwikhaya lethu elixabisekileyo lizaliseke.
Nantsi umthandazo ukusikelela indlu, ehlawuliswe amandla aqinisekileyo, ukholo kunye nothando lokucoca indawo nganye eyakha ikhaya lethu elihle, funda nje oku kulandelayo:
“Kuwe Nkosi, ndithetha nawe kwakhona ukuze usive isicelo sam. Kuba nguwe kuphela okwaziyo okusengcingeni yam, okwenzekayo kusapho lwam kunye nezinto ezifunwa yindlu yam, yiyo loo nto ndibhenela ekuthandazeleni wena, ndiyakucela ngentliziyo yam ukuba uze ekhayeni lam uzokuyigubungela. intsikelelo enkulu; Ndiyakucela ukuba uhlale kuyo, ukhanyise yonke ikona kwaye wenze ukukhanya kobukho bakho buvele kuyo yonke indawo ekhayeni lam.
Bawo onenceba nonamandla, iingcango zendlu yam zivulelekile wena, le propati ubundivumele ukuba ndibenayo ukuze ndikonwabele nosapho kunye nabahlobo bam, ndiyakubongoza ukuba uhlambulule lonke udonga ngamanzi akho angcwele, gxotha yonke imimoya emdaka kwikona nganye, susa uxinzelelo kunye nazo zonke iimvakalelo zentlungu, cima ubumnyama usigcwalise ngokukhanya kwakho ngonaphakade.
Ngamana nganye kwikona yeli khaya ingayibona intsikelelo yakho. Kuba nguwe kuphela onamandla kunye nokukwazi ukukhusela yonke ikona yale ndlu ngobukho bakho obunenceba, ukuze kungabikho nto isonzakalisayo thina nabo bahlala apha nothando lwakho.
Khathalela eli khaya Nkosi, sinike bonke ubulumko bakho ukuze usikelele indlu kwaye usikhusele kuyo yonke ingozi ekuyo, ungabavumeli ukuba bafike benenjongo ezimbi, bangabavumeli basihluthe izinto zethu, kungenzeki iingozi kwaye ayonakalisi kwintlekele yendalo.
Ndiyakucela Nkosi yam, ukuba unike ukhuseleko olufanelekileyo kule ndlu nakubo bonke abantu abakulo. Kwangathi uthando kunye nempilo zingalawula ngaphakathi kwesifuba sosapho, sinokwazi ukuqonda thina kwaye siphumelele. Masibuyele ekhaya yonke imihla siqinisekile ukuba yonke into igcinwe zizandla zakho ezigqibeleleyo, Thixo wam. Kuba nguwe kuphela onokujonga ubomi bethu kwaye aboyikiswa.
Bawo waseZulwini, ngamana intsikelelo yakho ize endlwini yam ukuze uthando luhlale lulawula kuyo. Gcina iingxaki, iingxabano kunye nokungaqondani kude nale ndlu ithobekileyo nakuye ngamnye kuthi ohlala kuyo. Ukuba uxolo nothando losapho lubonakale ngalo lonke ixesha.
Phalaza igazi lakho elingcwele ekungeneni kweli khaya ukwakha ikhaka lokhuselo, elikhusela ngamandla udonga nefestile nganye kuwo wonke umonakalo ovela kubantu besithathu, usikhulule kumashwa kwaye siphile ngokuzola okusempilweni nangokuvisisana. Ukuze wonke umntu oza kule ndlu azele ziintsikelelo.
Ndiyazi ukuba ukusukela ngalo mzuzu usebenza kwizicelo zam, yiyo loo nto ndikuthembile, kuba ndiyazi ukuba umamela isicelo sam sokusikelela ikhaya, endikwenzayo ngokholo olukhulu. Ukuba ufikile endlwini yam, yonke into iya kugcwele uxolo kunye noxolo.
Musa ukusishiya kwaye uhlale phantsi kophahla lwendlu yam, hlala nam kunye nabantu endibathandayo. Akukho nto ingcono kunokuhlala ukhuselekile ezinyaweni zakho. Ukuba ukhona, yonke into iya kuphucula. Hlala ugcwalise lendlu ngeentsikelelo.
Ndiyabulela Bawo othandekayo ngokumamela yonke into endiyicelayo, ndiqinisekile ukuba uzakukhusela ikhaya lam kunye nathi sonke apha ngothando lwakho olukhulu, egameni likaYesu onenceba.
UThixo akhusele ikhaya lam, Amen ".
Ukubaluleka koMthandazo wokusikelela indlu
Indlu yomntu okanye yosapho yindawo yokusabela apho abahlali banokufumana uxolo, imvisiswano noxolo. Kungenxa yokuba ikhaya lenzelwe ukuthanda kwakho, okudala imeko eyamkelekileyo ngakumbi kubaniniyo.
Kuyaziwa ukuba amandla abantu abahlala ekhayeni ondlelela indawo eyingqongileyo eyinika ubomi, ke sinako ukuqonda ukuba kuxhomekeke kwimeko yomntu ohlala okanye osendlwini, inokuchaphazela okusingqongileyo.
Yiyo loo nto sinokuqonda ukuba nabani na ongena ekhayeni lakhe ushiya inxenye yamandla abo kuwo, ke ngoko, ukuba umntu onamandla aqinisekileyo, iminqweno elungileyo kunye neengcinga zingena ekhayeni lethu, baya kuyibona kwaye bagcine inxenye yezo mvakalelo. Kwelinye icala, umntu ongathandekiyo oneemvakalelo ezimbi kunye neminqweno unokuchaphazela imvisiswano yekhaya lethu.
Umzimba wethu, okusingqongileyo kunye nabantu esibathandayo bayawaqonda la mandla kwaye kunokuba yingozi. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba sicoce izithuba zendlu yethu kwaye siyigcine kude kumandla angathandekiyo kwaye siqhubeke nokugcina indlu njengendawo engcwele apho kungekho nto imbi ichaphazela nabani na ohlala kuyo. Unokuba nomdla umthandazo kuSanta Alejo.
Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba ukuze ikhaya lethu lihlale licocekile, likhuselekile kwaye linoxolo, luxanduva lwethu ukuzigcina ngendlela efanayo. Kuba ukuba siphila kwixhala, uxinzelelo kunye nokuphelelwa lithemba asinakulindela ukufumana uthando kunye noxolo. Inkqubo ye- umthandazo ukusikelela indlu Iya kuba luncedo kuthi okoko nje ingabo sibathandayo ngokusingqongileyo. UThixo usenzela amayelenqe xa sinyanisekile kwaye sinyulu. Ke xa usenza i- umthandazo wokusikelela indlu kholelwa nzulu kwinto oyifunayo wena kunye nekhaya lakho.